.: ဘ၀တခု ရဲ့တနေ့ တာ (၂)
ဘ၀တခု ရဲ့တနေ့ တာ (၂)
ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက် ကျနော်လှည့်ကြည့်မိတော့ သူမရှိတော့ပါ..။ မောဟိုက်လွန်းသည့်အပြင် ဆာလောင်မှုကပါကျနော့ကိုထပ်နှိပ်စက်နေသည်။ ကျနော့လက်ထဲတွင်ပါလားသော ဓါတ်ပုံလေးကိုကြည့်မိသည်။ အခုလမ်းမပေါ်တွေ ထီးမပါလမ်းလျှေက်နေသော ကျနော့် ဓါတ်ပုံပါလို့ ပြောလျှင် အရူးလို့ ပါသတ်မှတ်သွားကြလိမ့်မည်မှာမလွဲ။ လမ်းဘေးတွင်စောင်ပါးပါး လေးတစ်ထည်နှင့် ကွေးကွေးလေး
အိပ်နေသော သူတချို့ ကို ကျနော်ကြည့်မိသည်။ ဘ၀ဆိုတာဒါပဲလား...။
ဒေါင်ခနဲမြည်သွားသော နာရီသံစဉ်မှ ၁၂ နာရီထိုးသံက ကျနော့် အတွေးတွေကို လှုပ်နှိုးလိုက်သည်...။ ယနေ့(၁) နာရီ တွင်ကျနော့ အလုပ်အင်တာဗျူးရှိသည်ပဲ...အလုပ်ရလျှင်တော့ ဘာမှပူစရာမရှိပါ...ရတဲ့လစာလေးနှင့် ချွေတာစားလျှင် ကျနော့် ရပ်တည်ရေးအတွက် သိပ်ပူစရာမလို..။ ဘတ်စ်ကားစီးရန် ကျနော့မှာပိုက်စံတပြားမှမလာသောကြောင့် အလုပ် ရှိရာသို့ ခပ်သွက်သွက်လေး လျှောက်မိသည်။ မျှော်လင့်ချက်လေးရေးရေးကို တွေးပြီး ကျနော် ပြုံးမိပါသည်။ အဆိုးတွေထဲ မှ အကောင်းတခုမဟုတ်လား...။
အလုပ်ကိုရောက်တော့ ၂ နာရီထိုးဖို့ ၅ မိနစ်သာလိုပါတော့သည်။ ကောင်တာတွင်ထိုင်နေသော အမျိုးသမီးရှိရာ ကို ကျနော်လျှောက်သွားမိသည်။
ကျနော် ၁ နာရီ ချိန်းထားတာရှိတယ် အလုပ်အင်တာဗျူးအတွက် .
မဟုတ်ဘူး ကျနော် ၁ နာရီချိန်းထားတာ အခု ထိုးပြီဗျ
နာရီကို ကြည့်တော့ ၁ နာရီကျော်ပြီ...။ အခန်းတွင်းရှိသောလူများကို ဝေ့၀ဲကြည့်မိသည်။ ပြီးတော့ လွတ်နေသောနေရာလေးတခု တွင် ကျနော် စိတ်ပျက်စွာ ထိုင်ချလိုက်သည်။
ကျနော် နှုတ်မှ ထွက်သွားခြင်းပါ၊ ကျနော့ဘေး နားတွင်ထိုင်နေသော အယောက် ၂၀ ခန့် ရှိသောသူများ တယောက်ပြီး တယောက်သာထွက်သွားသည် ...ကျနော့အလှည့်မရောက်သေးပါ။ သက်ပြင်းမောတခုချမိသည်။ ဘယ်တက်နိုင်ပါ့မလဲလေ ကျနော့အတွက် ဒီအလုပ် က မဖြစ်မနေလို အပ်နေသည်ပဲ။ စောင့်ရန်သာရှိတော့သည်။ နာရီကို ကြည့်တော့ ၄ နာရီကျော်ကျော်ရှိပါပြီ။ မနက်တည်းက ဘာမျှလည်းမစားရသေး။
ကျနော့နာမည်ခေါ်သံကိုကြားလိုက်ရသည်။ ကျနော်တော်တော်လေးပျော်သွားပါသည်။ အလုပ်ရတော့မည်။ ကျနော်မန်နေဂျာ ရှိရာကို ၀မ်းသာအားရ လျှောက်သွားမိသည်။
အ၀တ်အစားသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် မန်နေဂျာကို ကျနော် ကြည့်မိသည်။ အရင်က ကျနော့်အတွက် မန်နေဂျာဆိုသည်မှာ ရယ်စရာတခုဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ အခုတော့ ကျနော် သူ့ ကိုမော့ကြည့်ရသည်။ အပြောင်းအလဲတွေက ကြောက်စရာကောင်းလွန်းလှပါသည်။
မန်နေဂျာ....ခင်ဗျားနာမည် ကွန်ပြူတာထဲမှာ မတွေ့ ဘူး။ပထမဆုံးအကြိမ်လာတာလား
ကျနော့်ကို ဒီနေ့ အင်တာဗျူးအတွက် ချိန်းလိုက် လို့ လာတာပါ။
မန်နေဂျာ....နာမည်စရင်းတောင်မရှိတာ ဘယ်လိုချိန်းမှာလဲဗျ ၊
ကျနော့်တကယ်ပြောတာပါ...။ကျနော့ကို ဒီနေ့၁နာ ရီမှာချိန်းထားတာပါ။
မန်နေဂျာ....ရော့...ခင်ဗျားဒီ လျှောက်လွှာကို ဖြည့်ပြီး ကျနော့် စီပို့ လိုက်ပါ။
သူထိုးပေးသော လျှော်ကလွှာစာရွက် ကို ကျနော် မယုံနိုင်စွာကြည့်မိသည်။ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ မျှော်လင့်ချက်မရှိပါ....။ အလွန်ကံကောင်းလို့ အလုပ်ရမည်ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံး ၁ လလောက်စောင့်ရသည်ပဲ...။
ကျနော့ကို ကူညီပါ။ ကျနော့ တကယ့်ကို အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ ပါ။ ပြီးတော့ တကယ်လည်း ဒီနေ့ ချိန်းထားတာပါ သေချာပြန်ကြည့်ပေးပါနော်။ ခင်ဗျားကျနော့နာမည် ပေါင်းတာမှားနေလားမသိဘူး။
မန်နေဂျာ.....ခင်ဗျားကြည့်လည်းပြောပါဦး ။ ကျုပ် က မန်နေဂျာတယောက်ပါ ခင်ဗျားနာမည်တော့ ပေါင်းတက်ပါတယ်။
အထင်သေးစွာပြောလိုက်သော သူ့ စကားတွေက ကျနော့်နားသို့ သံရည်ပူလို စီးဝင်သွားသည်။ အ၀တ်အစားကို အလျှင်စလို ကောက်ထည့်ထားသော ခပ်စုတ်စုတ် အိတ်ကို ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်မည်။ ထားပါတော့လေ ကျနော့အတွက် အခုအချိန်မှာ အလုပ်တခုထက် ဘာမှ အရေးမကြီးပါ။
မန်နေဂျာ....ကျုပ်မှာ အချိန်မရှိဘူး ...ခင်ဗျားကို လုပ်လို့ ရတာ ၂ ခုရှိတယ်
၁။ ဒီလျှောက်လွှာကို ဖြည့်ပြီး ကျနော့ လိပ်စာနဲ့ ပို့ လိုက်ပါ။ အလုပ်ရရင် ခေါ်လိုက်မယ်
၂။ အခြားအလုပ်တခုကို သွားလျှောက်ပါ။ ဒီနော်တို့ ရုံးပိတ်ပြီ...။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြောရင်းထသွားသော မာန်နေဂျာ ကြောင့် ကျနော် စိတ်အားငယ်သွားသည်။မျှောင်လင့်ချက် တခုဆုံးရှုံး လိုက်ရပြီဆိုသော အသိနှင့် သူပေးသော လျှောက်လွှာ စာရွက် ကို ယူပြီး ကျနော့ ရုံးခန်းကို ကျောခိုင်းလိုက်သည်။ ကျနော့မှာ ရွေးစရာလမ်းတခုသာရှိသည်ပဲ။
Post By ငှက်ငယ်လေး at 4:07 PM
8 ယောက်က ဒီလိုလေးတွေပြောသွားကြပြီ:
လူနေမှုပုံစံ ကိုကြည့်ရတာ တော့ ဇာတ်လမ်းတည်ရှိရာက
၀တ္ထု တပုဒ်ကို မှီဝဲထားတာပါ...။အားလုံးတော့မဟုတ် ဘူး။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးတာကြာပြီ...သနားစရာကောင်းလို့ အမှတ်ရနေတာ...စာရေးချင်စိတ်လေးပေါ်လာလို့ ရေးလိုက်တာပါ။
အင်း ဖတ်နေရင်းက မောလိုက်တာဗျာ။ အပြင်လောကမှာလည်း ဒါမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ အရှုံးမပေးပဲ စိတ်ဓါတ် ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ကြိုးစားရင် အောင်မြင်ရမှာပေါ့လေ။
ငှက်ငယ်လေးရေ ဇာတ်လမ်းလေးက တစ်ကယ့် ဘ၀ သရုပ်ဖော်ပါပဲ ... ဘ၀ရဲ့ ခါးသီးမှုတွေကိုလည်း တွေ့နေရတယ် ..
အရေးအသား ကောင်းလိုက်တာ ..
နောက်ထပ် ဆက်ရန်တွေကို မျှော်နေပါတယ်ဗျာ
မျှော်လင့်ချက်လေးရေးရေးကို တွေးပြီး ကျနော် ပြုံးမိပါသည်။ အဆိုးတွေထဲ မှ အကောင်းတခုမဟုတ်လား...။
သိပ်ကောင်းတဲ့အတွေးလေးပါလား။ မှန်တယ်ဗျာ။ ဆက်ရေးအားပေးတယ်။